(प्रकृति उन्मुख सम्भोक क्रान्ती भनेको के हो ?)
यसै सन्दर्भमा मानिस यौनिक रुपमा के हो ? उसको यौन सम्बन्धि प्राकृतिक स्वभाब कस्तो थियो, कस्तो विकासक्रमबाट गुज्रियो र हालको मानब यौन मनोविज्ञान कस्तो छ ? त्यो बारे केहि तथ्यहरुसंग साक्षात्कार हुन आवस्यक छ । अहिलेसम्म खोजिएका बैज्ञानिक तथ्यहरुबाट के निचोडमा पुग्न सकिन्छ भने ब्यासो, फ्याउरो, वेभर्स (एक प्रकारको डल्फिन), अफ़र्स (शिल ) जस्ता केहि प्राणि र केहि चराका प्रजातिहरु मोनोगामस प्राणि भित्र पर्दछन । मानबको यौन विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने मानिस मोनोगामस प्राणि हैन । मानिस बहुयौन साथीसंग सम्भोग गरेर यौन आनन्द लिने पोलिगामस प्राणि हो । मानिसको प्राकृतिक गुण अनुशार जीबनभर एउटा यौनसाथीसंग सम्भोग गरेर ऊसले यौनिक सन्तुष्टि लिन सक्दैन । तर समय, परिस्थिति र चेतनाको बिकासक्रमले मानिसलाई बाध्यताबस पोलिगामसबाट मोनोगामसतर्फ घचेटी रहेको देखिन्छ । अहिलेको मानबिय यौन अवस्था मानिसको प्राकृतिक र अनुबांसिक गुण बिपरित मात्र नभएर मानिसले मानिस माथि शक्तिको आडमा थोपरिएको कथित धार्मिक, नैतिक र सामाजिक नीति नियमहरुको परिणती हो । यौनको प्राकृतिक नियमलाई मानिसले प्राकृतिक रुपमा नै बग्न दिएको भए विभिन्न रोग, सामाजिक विसंगती र यौन हिंसाको जन्म नै हुने थिएन । यी अहिलेसम्मका खोजले प्रमाणित गरेका थाथ्य हुन् ।
अध्यायनले के देखाएको छ भने मानिस मात्र नभएर प्रकृतिमा रहेका प्राणिहरु मद्धे ३ देखि ५ प्रतिशत जिबात्माहरु मात्र एक यौन साथीसंग सम्भोग गर्ने प्राणि अन्तर्गत पर्दछन । उनीहरुको यौन जीवनको अनुसन्धानबाट यो पत्ता लागेको छ कि पहिलो पटक छनौट गरेको जोडीमद्धे एक मर्यो वा हरायो भने बांचेकोले जीबनभर अर्को यौन साथि खोज्दैन र यौन सम्पर्क पनि गर्दैन । जनावरमा फ्याउरो, ब्वाँसो, शिल र डल्फिन (अफ़र्स ) मात्र त्यो यौन वर्गमा पर्दछन ।
तर धार्मिक रुढीग्रस्त समाजमा स्वतन्त्र रुपमा यौन छनौट गर्नबाट बन्चित गरिन्छ । यौन आवस्यकतालाई धार्मिक,बर्गीय र जातिय आधारमा बैध र अबैधको बिल्ला भिराएर हिँसा गर्ने र ज्यान समेत लिने गरिन्छ । प्राकृतिक नियम अनुशार छनौट र चाहना स्वतन्त्र छ, सुद्ध यौन चाहनाले मात्र प्रेरित छ र प्रेमपूर्ण छ भने त्यो यौन बैध हो । त्यसकोलागि बिबाह वा सामाजिक मर्यादा पुरा गर्न जरुरि छैन । यी यस्तै दमित चाहनाहरु बाँध फ़ुटेझै कलमको सहाराबाट बाहिर निस्कन्छन जसलाई हामि साहित्य वा यौन साहित्य भन्दछौं । प्रेम या यौन साहित्यको मूलकारण पनि कथित ब्याक्तिबादी सामाजिक नैतिकताले हाम्रो प्राकृतिक र जैविक अधिकार थिचिनुबाट बिष्फोट हुँदै गरेको मनोबैज्ञानिक बिद्रोह हो ।
अर्को तर्फ़ हाम्रा घरमा हुर्केका चेलीहरुलाई बिबाहपुर्ब, पति मरेको वा नभएको अवस्थामा यौन स्वतन्त्रताको अनुमति दिदैन । त्यो गलत मात्र नभएर यौन हिँसा हो । यौन प्राकृतिक चिकित्सा पनि हो । उपयुक्त केटासंग अबिबाहित वा पति गुमाएकाहरुले यौन सम्पर्क गर्नुलाई अपराध मान्नु हुदैन । बरु त्यो बारेमा अबिभाबक वा आमाले यौन सम्बन्धि सुरक्षा सतर्कता अपनाउने सल्लाह दिनु पर्छ ।
सन्दर्भस्रोत : The social control of sexuality by John Delamater, A report The sexual Revolution by Tan W. Smith, Makealove not war by david plyn, Sexual liberation is not the same thing as sexual Equality by Danielle crittelle, Darwin, evolution, & natural selection
More in this category: « कम्युनिष्ट गठवन्धनले काँग्रेसलाई फाइदा	अमेरिकामा ३ चिज ; खेलौना बन्दुक ,अपरिचित घरमा गाडी रोक्ने तथा घर भित्र छिर्ने प्रयास गरे तातो गोलि को शिकार सम्म हुने »